EX - ABSDF: သူလိုလူ သူရဲကောင်း
Ye Tun October 22, 2014 at 12:15am
ကင်ညာနို်င်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူ Stanley Kamau ဆိုသူက ဆင်းရဲလှတဲ့ ကျေးရွာလေးတခုမှ ကြီးပျင်းလာခဲ့တဲ့ သူ့ဘ၀က အင်မတန်မှ ဆင်းရဲလှတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ငယ်ငယ်ထဲက ပညာရေးသာလျှင် လွတ်မြောက်ရာလို့ ယုံကြည်ထားလို့ ကျောင်းပညာကိုသာ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားဆည်းပူးခဲ့တယ်။
မပြည့်စုံတဲ့သူဘ၀မှာ ကြိုးစားမှုကြောင့် မိဘဆွေမျိုးများ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးများကလည်း ၀ိုင်းဝန်းအားပေးခဲ့လို့ ကြိုးစားလေ့လာဆည်းပူးရင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပညာသွားသင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ အောင်မြင်မှု ရလာချိန်မှာတော့ သူ့အရပ်ဒေသ အနေနှင့်ကြည့်ရင် သူဟာ ပညာတက် လူချမ်းသာတဦးလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ သူမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့ ကျေးရွာလေးမှာ ပြန်လာပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ မထင်မှတ်တဲ့ အသေးဖွဲလေးတခုကို သွားတွေ့တယ်။
ဘယ်လိုတွေ့လည်းဆိုတော့ သူ ခရစ္စမတ်ပါတီပွဲ ကျင်းပတဲ့အခါမှာ စားကောင်းသောက်ဖွယ်များနှင့် အ၀တ်စားများကို လှူဒါန်းလေ့ရှိတယ်။ ထိုအခါ လူအချို့မှာ သူ့ရဲ့ အလှူကို လာချင်သော်လည်း Jiggers လို့ခေါ်တဲ့ လက်တွေ ခြေတောက်တွေမှာ ကပ်လေ့ရှိတဲ့ ပိုးမွှားတမျိုး တွယ်ကပ်ခြင်းခံရတဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရပြီး လမ်းမသွားနိုင် လူတောမတိုးဝံ့ဖြစ်ပြီး မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုစကားကို ကြားကြားချင်း Kamau အနေနှင့် နောက်ပြောင် ပြောနေကြတယ်လို့ ထင်မိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ထိုသူတွေရဲ့ အိမ်ကို လိုက်သွားပြီး ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ လူအများဟာ တကယ်ပဲ ဝေဒနာဆိုးကို ခံစားနေရပြီး ကလေးတွေ ကျောင်းမသွားနိုင် လယ်သမားတွေ လယ်ထဲမသွားနိုင်ဘ၀နှင့် ဆင်းရဲတွင်း နက်သည်ထက်နက် နေရတာကို မြင်ရတယ်။ ကင်ညာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ မှတ်တမ်းမှာ လူပေါင်း ၁.၄ သန်းကျော် Jiggers ပိုးတွယ်ကပ်ခြင်းခံရပြီး ထိုအထဲမှ ၈၀% ကျော်က ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ ပမာဏက ပိုများပြီး ပိုိုဆိုးဝါးတယ်။
သူ့မွေးရပ်မြေကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်တဲ့ Kamau အနေနှင့် Jiggers ကို တိုက်ဖျက်ပေးရင် သူ့ရပ်သူ့ဒေသကို အကောင်းဆုံး ကူညီရာရောက်မယ် လို့သိလိုက်ပြီး။ သူပိုင်ငွေနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများဝယ်ယူပြီး သူနှင့်အတူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအချို့ ကျေးရွာတွေကို ဆင်းပြီး Jiggers ပိုးတွယ်ကပ်နေသူ လူအများကို ဆေးရည်နှင့် ဆေးကြောပေးပြီး ကုသပေးတယ်။ ထိုနောက် သူ့အဒေါ်လှူဒါန်းထားတဲ့ ခြံတခုမှာ ငှက်ပျော်သီးစိုက်ပျိုးနည်းကို သင်ကြားပေးပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးစေ့နှင့် အထောက်ကူပြုပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးတယ်။ ထိုကဲသို့ သာမန်နည်းလမ်းဖြင့် Jiggers စွဲကပ်လို့ စီးပွားပျက်တဲ့အထိ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ဆင်းရဲတွင်းထဲက ထွက်နိုင်အောင် လမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
Kamau ပြောသေးတယ် ဆေးရုံတွေရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဝေလံလှတဲ့ ဒေသတွေမှ ဝေဒနာခံစားနေရဲ့ ဆင်းရဲသားတွေ လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက်နို်င်လို့ မသွားနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ Kamau ရဲ့ ရွာစဉ်လှည့်ပြီး ကုသပေးတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်က ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိမှာပါတဲ့။ တကယ် ဟုတ်ကြောင်းကို သိသိသာသာ ပြောင်းလွဲလာတဲ့ ဒေသတွင်း အခြေနေတွေက သက်သေပြနေပါပြီ။
တကယ်တော့ Kamau ငယ်ငယ်ကလည်း Jiggers စွဲကပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ Jiggers စွဲကပ်လို့အတန်းဖေါ်များရဲ့ လှောင်ပြောင်မှုအောက်မှာ ကျောင်းထွက်တော့ မလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကုသသက်သာခဲ့ပြီး သူစာဆက်သင်ရင်း အခုလို အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ရောက်ခဲ့တာပါ။ သူ့အနေနှင့် Jiggers ပိုးမွှားတွယ်ကပ်မှုကို ယနေ့အချိန်ထိ သူတို့ဒေသအတွင်းမှာ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့သလို အခုလို အခြေနေ ဆိုးလိမ့်မယ်လို့ မတွေးခဲ့မိပါဘူး။ အခုတော့ Stanley Kamau ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့သော Ahadi Kenya Trust ဆိုတဲ့ NGO မှာ အသင်းဝင်ပေါင်း ၂.၆ သန်းကျော်မှာ အများစုဟာ တချိန်က ဒုက္ခရောက်ခဲ့သူတွေပါ။ ထိုအဖွဲ့ဝင်တွေက တယောက်မှ တယောက်ကို ကူညီပြီး ကင်ညာနိုင်ငံအတွင်းမှာ Jiggers ပိုးမွှား တွယ်ကပ်ခံရသူများကို ဆေးဝါးကုသပေးပြီး သူတို့ဘ၀ကို ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ပေးနေပါပြီ။
အာဖရိကမှာ ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော် Jiggers ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ သိပံ္ဗအမည်က Tunga penetrans ဖြစ်ပြီး။ ပိုးအမက လူအရေပြားကိုတူးပြီး ဥ ဥချပြီးနောက်။ မျိုးပွားခြင်းအမှုကို လူ့အရေပြားပေါ်မှာ ဆက်လက် လုပ်ပါတော့တယ်။ Jiggers ပိုးကပ်ခံရသူတဦးရဲ့ ခြေဖ၀ါးပါ။ Jiggers တွယ်ကပ်မှု အခြေနေဆိုးလာတဲ့အခါ ဘာမှကိုင်တွယ်မရအောင် ဖြစ်လာတဲ့ လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးဆစ်တွေမှာ တွယ်ကပ်တဲ့အခါမှာတော့ လှုပ်ရှားသွားလာဖို့ ခက်ခဲလာပါပြီ။ အခုဆိုရင် Saving Kenya's feet, and future ဆောင်ပုဒ်နှင့် Ahadi Kenya Trust အဖွဲ့ဟာ ကင်ညာနိုင်ငံမှာသာမက Tanzania နိုင်ငံ Uganda နိုင်ငံများအထိ ခြေဆန့်ပြီး Jiggers ပိုးမွှားတွယ်ကပ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ကိုင်နေကြပါပြီ။ ဆေးဝါးကုသပုံ မခက်ခဲလှပါဘူး Dettol လိုဆေးရည်မျိုးဖြစ်စေ ဆပ်ပြာရည်နှင့်ဖြစ်စေ တနေ့ကို ၁၅ မိနစ်လောက် ဆေးပေးရင် ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ခန့် ကြာတဲ့အခါ ပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူများလည်း ဒီအကြောင်းလေးဖတ်ပြီး တဲ့အခါမှာ NGO ဆုိုတာနှင့် အမြင်ကပ်တဲ့စိတ်တွေ နိုင်ငံခြားလွှမ်းမိုးလာမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေရှိခဲ့ရင် လျော့သွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်အစိုးရ တရပ်ဖြစ်လာဖို့ အစိုးရချည်းပြောင်းရုံ နှင့် ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေ အကြားမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ လူ့အသိုင်းဝိုင်းကို တည်ဆောက်နိုင်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Daisy Carrington. "The Parasite Keeping Millions in Poverty". African Voices. CNN. October 21, 2014. Web.